CAVAPOO IMBWA INOBEREKA RUZIVO NEMIFANANIDZO - IMBWA
Cavapoo Imbwa Inobereka Ruzivo neMifananidzo
Cavalier King Charles Spaniel / Poodle yakavhenganiswa Mhando Dzembwa
Charlie the Cavapoo (Cavalier King Charles Spaniel / Poodle musanganiswa) semunhu mukuru (ona puppy pikicha pazasi), mufananidzo neruremekedzo rweAyers Pampered Pets
mifananidzo yeswider glider
Iyo Cavapoo haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Cavalier King Charles Spaniel uye iyo Poodle . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese muchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
American Canine Mbeu dzakauchikwa Club = Cavapoo
Dhizaini Imbwa Kennel Kirabhu = Cavapoo
International Dhizaini Canine Registry®= Cavapoo
Mugadziri Anobereka Registry = Cavapoo
'Uyu ndiLucy. Iye Cavapoo, iyo muno muAustralia yatinoti Cavoodle. Ane mavhiki gumi nerimwe uye mbwanana yakanakisa. Husiku hwekutanga patakamutora ndakamuisa mune yakapfava kennel ine iyo flap kumusoro, asi yakavharirwa muimba yekugezera. Akachema zvishoma uye akamuka usiku kamwechete. Nousiku 4, haana kuita ruzha pandakamupinza uye haana kumuka kusvika 6:30 am. Akave ari nyore kudzidzisa, kunhonga kugara, pasi, kurisiya uye kubata mirairo nemavhiki mapfumbamwe. Iye anotamba, asi anodawo kumbundira pasofa. Iye akanaka nevana uye atora kumba kwedu zvakanyatsonaka. Iye achiri kuchema muzuva ratinoenda isu ... asi zvakanaka patinodzoka kumba, uye anongoda kukwatira kwatiri. Iye anoda kutsenga , asi haitsenga midziyo, mimwe minwe uye zvirimwa. Ari kudurura zvishoma, asi ini handina chokwadi kana icho chiri chinhu chembwanana, uye nekuti tiri kubuda mwaka wechando pano. Ndiye mbwanana yakanakisa. '
'Iyi imbwa yangu Sloopy iyo Cavapoo pamwedzi minomwe yekuberekwa. Akanaka chaizvo uye akangwara. Anoziva kugara, kumira, kugara, kuisa, kumonera, kuridza mabhero kuenda panze / poto, pasi, kufamba kwemwedzi, kusvetuka, kutora, huya (zvisinei anongouya chete kana achinzwa kuda kunyangwe achiziva iwo murairo), tsamba, kutsvoda, zvisiye uye udonhedze. Zvese zvandaimudzidzisa akadzidza zuva iri uye akange akanyatso dzimba dzimba mumwedzi miviri (dambudziko rake guru raive rekungowana nzira yekundiudza mabudiro, saka ndakawana mabhero kwaari). Anoda vaenzi vepamba, asi anonyara vanhu vemunharaunda. Iye akavimbika kwazvo uye anonditevera kwese kwese. Kana ndikanonoka kumirira kudzidza anonetseka kuramba akamuka kusvikira ndaenda kunorara. Akanyatso batanidzwa nekuti anochema kana ndiri muchimbuzi uye akazove anozviisa pasi peye mwedzi wekutanga wandakadzidza kumufuratira kusvikira tabuda panze ndokurega kuzviita. Iye zvakare munyoro chaizvo nevana vadiki. Zvisinei, ndakaona kuti ane udyire nedzimwe mhuka. Kana akatenderedza imbwa yaamai vangu (a Doberman iyo yaasingatyi) anoba matoyi ake oaviga munzvimbo diki kwazvo kuti akwane. Anoda kuviga mabhonzo musofa, kutora chizi, imbwa paki, mahombekombe , tora (kanda bhora uye achatamba kwemaawa) nekugumbatira. Ini ndashandisa ino webhusaiti kubatsira kuwana chipfuwo / tsvagiridzo, uye ndinofunga anga ari sarudzo yakanaka ndatenda. '
Charlie the Cavapoo (Cavalier King Charles Spaniel / Poodle hybrid) sembwanana (ona munhu mukuru pikicha pamusoro), mufananidzo neruremekedzo rweAyers Pampered Pets
Mufananidzo neruremekedzo rweShaloma Loves Puppies
Ona mimwe mienzaniso yeCavapoo
Cavapoo Mifananidzo 1
Chinyorwa cheCavalier King Charles Spaniel Sanganisa Mbeu Dzakaberekwa
imbwa yakaita sei chikamu chekusiya inodhura
nhema muromo cur bulldog musanganiswa
cocker spaniel weiner imbwa musanganiswa
american eskimo shih tzu musanganiswa
chirungu uye french bulldog musanganiswa
anatolian mufudzi mukuru pyrenees musanganiswa